South African Airways: Vols kubva Johannesburg kuenda kuMauritius izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » South African Airways: Vols kubva Johannesburg kuenda kuMauritius izvozvi
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Mauritius Breaking Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
South African Airways: Bhururuka kubva Johannesburg kuenda kuMauritius izvozvi
SAA yave kusvika mwedzi wayo wekutanga uzere wekushanda nendege dzemuno kubva kuJohannesburg kuenda kuCape Town uye mudunhu kuenda kuAccra, Kinshasa, Harare neLusaka. Mazuva ese Maputo sevhisi inotanga muna Zvita 2021.
Mauritius ine hukama hwakasimba neSouth Africa uye iri mbiri nzvimbo inozivikanwa yekushanya uye bhizinesi kuenda.
SAA nzira yemigwagwa inogara ichiongororwa uye kuongororwa zvinoenderana neanotakura post-bhizinesi kununura zano rekusimudzira uye purofiti.
SAA inofara kuve nekutangazve mabasa kuMauritius, ayo munguva yakapfuura anga achizivikanwa uye achibatsira.
South African Airways (SAA) iri kuenderera mberi nekuvaka netiweki yayo nekutangazve kushanda kuMauritius kubva muna Mbudzi 21st, 2021. Ndege dzinozotanga kushanda kaviri pasvondo paChitatu neSvondo, dzichisimuka Johannesburg OR Tambo International (ORTIA) na09: 45am nendege dzinodzoka dzichibva kuMauritius na04: 35 pm.
South African Airways Mukuru wenguva pfupi, VaThomas Kgokolo vanoti, “Chikamu chedu gwara rekukura ndechekuona nzira paine kudiwa uye dzinogona kubatsira mutakuri. Kumutsiridzwa kwemasevhisi kuMauritius kunosangana neese ari maviri maitiro. Zvakare, nyika iyi ine hukama hwakasimba neSouth Africa uye iri mbiri nzvimbo inozivikanwa yekushanya uye bhizinesi kuenda. Tine chivimbo chekuti tikiti rekutora richasimba, kunyanya mwaka wezhizha zvawava kusvika. ”
Saa yava kusvika mwedzi wayo wekutanga uzere wekushanda nendege dzemuno kubva kuJohannesburg to Cape Town uye nharaunda kuAccra, Kinshasa, Harare neLusaka. Mazuva ese Maputo sevhisi inotanga muna Zvita 2021.
Kgokolo anoti nzira yemigwagwa iri kugara ichiongororwa uye kuongororwa zvichiteerana neyekutakura-bhizinesi nzira yekununura yekusimudzira uye purofiti.
"Ichi chiito chine musoro chinogamuchirwa nendege pasi rese zvichipa mamiriro ekunze akaoma indasitiri inozviwana irimo. Zvichienderana nekutora kusvika kunzvimbo dzazvino uye nepari kudiwa ramangwana, tichawedzera nekutora nzira."
Kgokolo anodaro Saa iri kufara kutangazve mabasa kuMauritius, ayo munguva yakapfuura anga achizivikanwa uye achibatsira.
Nguva yekubhururuka kuenda nekudzoka kubva munyika ingangoita maawa mana.